Shirka: Soo-jeedinta waraaqda "firfircoon" - Geofumadas
Abriil, 2009 tabo cusub, Microstation-Bentley
11 Tani May Bentley Systems wuxuu soo bandhigi doonaa shir saxaafadeed ah oo uu qorsheynayo in uu muujiyo soo kabashadiisa si uu u wareejiyo warqad dhaqameed oo ah unug firfircoon.
Martiqaadka waxaa soo diray Christine maanta, waxaan u maleynayaa in bisha inteeda kale ay wax badan ka sheegi doonaan shabakadaha ama meelaha kale. Waayo, hadda waan qaadanayaa qaansada iyo kan dhiirigelinta neefta.
Ilaa iyo hada waxaa la baray in kombiyuutarka iyo natiijooyinka dhijitaalka ah ay ka dhigi doonaan walxaha isku midka ah ee loo yaqaano waraaqda inay noqdaan wax soo noqnoqonaya. Si kastaba ha ahaatee, waxqabadka ayaa ina baray in laga tago taageerada daabacan, saxeexaaga, shaabaddaada iyo nooca qaxwada oo aan la beddeli karin mid ka mid ah gawaarida lagu dhejiyo haddii aanan dooneynin inaan qaadno dhibaatooyinka keenaya.
Waqtigaan ka hor Bentley ayaa dalbaday saxiixa digital, taariikhda taariikhiga ah, maamulka iyo isku dhafka badan ee dukumintiyada. Waa muhiim dhufto ee, Microstation iyo Project Wise ayaa diirada saaraya arrintan, waxaan u malayn karnaa in wax kale oo soo socda ay soo socdaan.
Saacadaha 30 waxay noqon doonaan Shirarka Live. 11 ee Maajo, 9: 00 AM, Waqtiyada Bariga ee Maraykanka iyo 15: 00 ee Xarunta Europe.
Waddanka Maraykanka iyo Kanada lambarka (888) 668 - 1399 ayaa loo heli karaa wadatashi la nool.
Waddamada kale waxaa jira (706) 758 - 9640
Xidhiidhku waa tan:
Aqoonsiga Kulanka: T4SQPB
Koodhka Gelitaanka: DynamicPlo
Post Previous«Previous Bixiyeyaasha bixiyeyaasha adeegga ee Cadastre
Post Next Sida loo beddelo astaanta Google EarthNext »